? ? ? ? ? ဗျိုးးးးးးးးးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ? ? ? ? ? ဗျိုးးးးးးးးးးး
? ? ? ? ? ဗျိုးးးးးးးးးးး
- Aye Lwin Oo
Posted by Aye Lwin Oo on May 17, 2014 in Buddhism | 23 comments
ဘာပြောရမှန်းမသိလို့ . . . . ဗျိုး . . . ဟစ်လိုက်တာပါ။
ကျွန်တော့သား မြို့ထဲကအပြန် မြေနီကုန်း ကုန်းတက်မှာတွေ့လို့ ရိုက်လာတဲ့ ပုံပါ။
လူ . . . ? ? ? သင်္ကန်းခြုံထားတော့ လူမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်။
ရဟန်း . . . ? ? ? ခေါင်းစွပ်လက်ရှည်ဝတ်ထားတော့ ရဟန်းမဟုတ်လောက်ဘူးထင်။
နွေပူပူမှာ လက်ရှည်ခေါင်းစွပ်နဲ့၊ သင်္ကန်းနဲ့၊ ခြေအိတ်နဲ့ . . . . . . . . . . . . .
မြတ်စွာဘုရား . . ကယ်တော်မူပါ . . . . .
About Aye Lwin Oo
Aye Lwin Oo has written3post in this Website..
သင်ခဲ့တဲ့စာတွေက Engineering ၊ ၀ါသနာပါတာက Machine Design ၊ နှစ်ပေါင်း၂၀လောက်လုပ်ခဲ့တာက Shipbuilding ၊ အခုလုပ်နေတာက Trading ၊ တစ်ယောက်ထဲရှိခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အိမ်သူအတွက်တော့ အသက်ရှုတိုင်း ကဗျာပါဘဲ
View all posts by Aye Lwin Oo →
အဲဒါ တမင်ပွဲဆူအောင် ဝတ်ထားတာ ထင်ရဲ့။
စိတ်မမှန်တဲ့ ပုံတော့ မရှိ။
ကိုယ့်ပုံကို ဒါ့ပုံရိုက်ပီး တင်ဒါလားငင်င် …
လဂါး .. နောက်တာပါ …
ဒီလိုတွေ အများကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဗျ …
ရွှေဂုံတိုင် တစ်ဝိုက်မှာဆို ပိုများသေးတယ် …
ဒါတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဘာမှ မလုပ်တော့ …
ကိုယ့်ဟာကို သွားပြောလည်း ရိုက်ခံရဖို့ပဲ ရှိတော့တယ် …
ဒါမျိုးတွေ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ် ….
Aye Lwin Oo says:
နောက်ထပ် ၃ယောက်လောက်တော့ အနဲလေး ဘဲ
သားတွေ၊ သမီးတွေ ပြောပါတယ်
သံဃ့မဟာနာယက က.. ဘုန်းဘုန်းတွေ.. နိုင်ငံတော်အခြေခံဥပဒေအပေါ်ကနေမယ့် ဥပဒေလုပ်ထုံး.. လုပ်နေရလို့.. မအားကြောင်း..
ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲလာပြီး လွတ်လပ် စွာ ထုတ်ဝေခွင့်ရသောအခါ အဓမ္မ ဝါဒစာအုပ်များ၊ ထေရဝါဒနှင့်မညီ သော စာအုပ်များထွက်ရှိလာပါသည်။ ကိုယ်လိုရာဆွဲ၍ ဟောပြောရေးသား သဖြင့် အဓမ္မဝါဒများဖြစ်လာခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ သို့ပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ်များ၊ စာစောင်များ၊ အသံ သွင်းခွေများကို နိုင်ငံတော်သံဃာ့နာ ယကအဖွဲ့က စိစစ်ခွင့်ပြုပြီးမှ ထုတ် ဝေသင့်ကြောင်းအဆိုကို တင်သွင်းပါ တယ်”ဟု ဆိုသည်။
ယခင်ကာလများတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရစာပေစိစစ်ရေး၌ မှတ်ပုံတင် ပြီး နိုင်ငံတော်မှ စိစစ်၍ခွင့်ပြုပေးခဲ့ ရာမှ စာပေစိစစ်ရေးမရှိတော့ဘဲ လွတ် လပ်စွာရေးသားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး အဓမ္မဝါဒ များဖြစ်လာခြင်း၊ အဓမ္မအဖွဲ့အစည်း များရှိလာသောကြောင့် သာသနာ တော်သန့်ရှင်းတည်တံ့ရေးအတွက် သာသနာတော်နှင့်သက်ဆိုင်သော အပြော၊ စာသား၊ အခွေများကို သံဃာ့ နာယကအဖွဲ့သို့တင်ပြရန် ပဉ္စမအ ကြိမ်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
​ဘေးက တစ်​​ယောက်​ဘာလို့ဖျက်​ထားတာလဲ ??????
အဟီး လူ​ဒွေ သူစိတ်​၀င်​စားရာ ဦးစား​ပေးတာပဲ
မှတ်တိုင်မဟုတ်တဲ့မှတ်တိုင်မှာ လူတွေကားစောင့်နေတဲ့အထဲ တွေ့တာပါ။ ရိုက်လိုက်တော့ တစ်ခြားသူတွေပါနေပါတယ်။ မမြင်စေချင်လို့ crop လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘေးမှာ ထီးစောင်းပြီးထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကျတော့ rectangular crop လုပ်လို့မရလို့ အမဲရောင်နဲ့ဖုံးလိုက်ပါတယ်။မျက်နှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေလို့ မသိစေချင်လို့ပါ။
ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်…ဒုလ္လဘ ၀တ်တဲ့ တစ်ယောက် ဖျားနေလို့ အဲ့လိုဝတ်ထားပုံရတယ်
ကိုကြီးမိုက်ပြောသလို ဂီလာန များလားမှမသိတာလေ
ကျ နော် သိ တာ လေး ပြော ပြ မယ်။
ရ ဟန်း ( ၂) မျုိး ရှိ ပါ သ တဲ့။
တို တို ဘဲ ပြော လိုက်ပါမယ်။
စ နစ် တ ကျ နဲ့ သိမ် ၀င် သတ်မှတ် ထား တဲ့ စည်း ကမ်း ချက် နဲ့ ညီ မ ညီ အ မေး အဖြေ လုပ် ပြီး မှ
သတ် မှတ် ထား သောာ သံ ဃာ တော် အရေ အတွက် က လဲ ခွင့်  ပြု ထိုက် ကြောင်း ထောက် ခံ ပေး မှ
ကို ရင်ငယ် ဘ ၀ ကို ကျော် လွန် ပြီး ရ ဟန်း ဘ ၀ ကို ရောက် လာ သော ပုဂ္ဂိုလ် မှာ သာ သံဃာ တော် အစစ် ဖြစ် ပါ သတဲ့။
ဘုန်း ကြီး တွေ ၀တ် လေ့  ၀တ် ထ ရှိ တဲ့ သင်္ကန်းေ လးကို ကောက် ရုံ လိုက် တာ က တော့
သင်္ကန်း ၀တ် သူ ဘဲ ဖြစ်ပါ သ တဲ့။
အဲ တော့ အလွယ် ပြော ရင်တရား ၀င် နဲ့ တ ရား မ ၀င် အဲလို ကွာ ပါ မယ်။
ကဲဒီ တော့ တ ရား မ ၀ င် သူ အတွက် အုံးအ စား မ ခံ ကြ ပါ နဲ့ တော့ ။
သူ့ သေ ဘာ သူ ဆောင်ပါဘဲ။
သူ့သဘောသူဆောင်ပြီး သူ့လမ်းသူသွားတာ အုံးစားဖို့မလိုပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုး လူငယ်တစ်ယောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံလာပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ true story လေးတစ်ခုကို အများသိအောင် ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ ဆွစ်ဇာလန်က ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဓမ္မသာမိကစီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး volunteer တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကင်မရာတစ်လုံးတည်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်လေးကို deliverance ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ dhammadana.org မှာ ကူးယူလို့ရပါတယ်။ မြန်မာ subtitle version ကို Lokuttara (Myanmar movie from dhammadana.org) နံမည်နဲ့ youtube မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် download လုပ်တုံးက အသံပါပါတယ်။ အခုတော့ အသံဖျောက်ထားတာတွေ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Leo ဆိုတဲ့ ဆွစ်လူငယ်တစ်ယောက် တရားအားထုတ်ချင်လို့ မြန်မာပြည်လာပါတယ်။ သူ့ကို ကူညီမဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ ဘာလို့ဘုန်းကြီးမ၀တ်တာလဲမေးတော့ ဘုန်းကြီးမ၀တ်ချင်ဘူး၊ တရားဘဲအားထုတ်ချင်တယ် လို့ ဖြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲမေးတော့ . . .
“ ရဟန်းအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်၊ လူတွေနဲ့တူတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တယ်၊ ဈေးမှာအချိန်ကုန်တယ် ” လို့ပြောပါတယ်။ (ရုပ်ရှင်ထဲက မြန်မာ sub ကို ကူးရေးတာပါ) သူရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ တွေ့တဲ့ ရဟန်းတွေကိုကြည့်ပြီး အဲ့လို ဆုံးဖြတ်တာပါ။
ကိုယ်ကြိုက်လို့2piece နဲ့ဘဲထွက်ထွက်၊ သူ့သဘောသူဆောင်တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သင်္ကန်းရုံပြီး လူတွေနဲ့တူတဲ့ရဟန်းက လူကြားထဲတိုးတာတော့ သူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အဆင့်ကို ကျော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားဘာလုပ်နိုင်လို့လဲ လို့ကျွန်တော့ကိုမေးရင်လဲ . . . . . ဗျိုး . . . . လို့ အော်ရုံဘဲ တတ်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
အရူး မဟုတ်ရင် တော့ အလိမ်ပဲ နေမှာ မဟုတ်ခဲ့ရင်
ကန် တော့ပါ ရဲ့ 
.ဒီဆိုက်ထဲက ဆရာဆရာမ များမပါတဲ့( ထပ်ပြောပါမယ်-ဒီဆိုက်ထဲက ဆရာဆရာမများမပါ) မြန်မာပြည်သားအများစုကြီးက
.သင်္ကန်းဝတ်ထားတိုင်း ရဟန်းလို့ ထင်နေကြတာ အရိုးစွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်..
.ဒီပုံစံ သင်္ကန်းဝတ်ကို မြင်ရရင် အဲဒီ အထင်မှားအမြင်မှားအစွဲမှားကြီးတွေ နဲနဲတော့ လျော့သွားနိုင်တာမို့
.ဒီဓါတ်ပုံထဲက သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေးကို ကျုပ်အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်မိပါကြောင်း…
.လမ်းကြုံရင် လဘက်ရည် ခေါ်တိုက်ဖို့အထိ စဉ်းစားထားပါကြောင်း….
နောက်ခါ လက်ဘက်ရည်ဖိုး မရှိရင်
ဒီလူကြီးရှေ့မှာ ကိုယ်ယောင်ပြဦးမှ …..
ကျနော့အမြင်!
ဘေးကအမျိုးသမီး ထီးဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့ 
ပူနေတဲ့ အချိန်ပေါ့ 
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ 
အနွေးထည်အင်္ကျီလက်ရှည်နဲ့ခြေအိပ်ဝတ်ပြီး အပူခံနေဖို့ဘယ်သူမှ
ဖြစ်ဖို့ များတာက နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့နယ်ကလာတဲ့စာသင်သား
ကိုယ်တော်ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ( စိတ်ချွတ်ယွင်းမှုမရှိခဲ့ ရင်ပေါ့ )
နောက်ပြီး သူ့ အကြည့် အမူအယာက စိတ်မလုံမလဲဖြစ်နေပုံ မျိုးပဲ
သူ့ ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပေါ်။
ဖျက်မယ့် ဖျက် ဒီကိုယ်တော်ရဲ့မျက်နှာပါ ကွယ်ထားသင့် တယ်။ လည်အောက် ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းလောက်ဆို လုံလောက်ပါပြီ။
လျက်ဆားပုလင်းကျောက်စ် ဒီပုံကို အနုလုံပဋိလုံကြည့်ပြီး ယျေဘူယ ကောက်ချက်ချရရင်…
– ဒီရာသီ ပူပူအိုက်အိုက် ဒီလိုဝတ်ထားရင် ဂီလာန မကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်ရမယ် (ဥပမာ… ငှက်ဖျား)
အိမ်ကို အနွေးထည်လက်ရှည် လာအလှုခံဖူးတဲ့ ကိုယ်တော်တွေရှိဖူးတယ် (မိသားစုက ဗုဒ္ဓဘာသာပါ)
– အမေဂျီးကားတို့ ဩဇီတို့ အင်္ဂလန်တို့ကကိုယ်တော်တွေဆို ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် သင်္ကန်း အောက်က ဂျင်းဘောင်းဘီ ၊ အပေါ်က တီရှပ်နဲ့ ဆွယ်တာလက်ရှည် ၊ ခေါင်းစွပ်ပါစွပ်ပြီး ရှူးဖိနပ်တောင်စီးထားတာ ။ နောက်ပြီး မော်တော်ကားလည်း ကိုယ်တိုင်မောင်းရတာခင်ဗျ ။ ဒီခေတ်ထဲမယ် ဝိနည်းနဲ့အညီသင်္ကန်းက ဘယ်မှာရနိုင်တာမှတ်လို့… အဲသည်တော့ ဘာမှပြောရန်မရှိ
လျှာဇဝတ်အုပ် ဦးကျောက်စ်ပေါဒါ ဆင်းစာဇရာဗေပဲ…
ဒီပုံကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး။
မဖြစ်သင့်တဲ့ပုံစံကို ကြည့်နေကြတာ စိတ်ပျက်စရာပဲ။
စီးထားတဲ့ ဖိနပ်ကလည်း ဘုန်းကြီးတွေ စီးတတ်တဲ့ ကတ္တီပါဖိနပ်။
ကျမ တခါက အေးတဲ့အရပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို အရောက် ဆရာတော်ကို အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့ ဆရာတော်က မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူ၊မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မယ့်ပုံဆိုတော့ အနွေးထည် အင်္ကျီ ချွတ်ပြီးမှ အရိုက်ခံပါတယ်။
၀တ်ကြတာလည်း သင်္ကန်းရောင်ပဲ ၀တ်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံထဲက ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အရောင်ကြားကြားဝတ်တာဆိုတော့ ဘုန်းကြီးသာဖြစ်ရင် မသင့်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချရမှာပေါ့။
ဒါပေမယ့် သင်္ကန်းရောင် အနွေးထည်မရှိရှာလို့ ရရာကောက်စွပ်ထားရလေသလား။
တခုရှိတာ သူက အယောင်ဆောင်ချင်တဲ့စိတ်တော့ ရှိပုံမရဘူး။
မိုးသု(မန္တလေး)ရဲ့ ရဟန်းသံဃာကို ဝေဖန်ကောင်းသလား ဖတ်ဖူးကြတယ်မလား။
အဲဒီထဲမှာ မိုးရေခံသင်္ကန်းမရှိ(ရှားပါးလို့) ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ရေချိုးကြတဲ့ ကိုယ်တော်တွေကို ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးရဲ့ အခြွေအရံတွေကတွေ့ပြီး ကျောင်းအမကြီးကို တိုင်ကြသတဲ့။
ကျောင်းအမကြီးက ဒီရဟန်းတွေမှာ သင်္ကန်းရှားပါးလို့သာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီး မြတ်စွာဘုရားထံ မိုးရေခံသင်္ကန်း လှူဒါန်းခွင့်တောင်းလို့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး လှူခွင့်စရပါသတဲ့။
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး အဲဒီပုံကိုမြင်ဖူးမယ်လို့ ထင်မိတာ ကိုယ့်ကွန်မန့် ကိုယ်ပြန်တွေ့မှပဲ အဲဒီပုံကို ရေးတေးတေး မှပေါ်လာတယ်။